Umthandazo kwiNkosi yeNceba ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kwimeko apho ufumanisa ukuba unamaxesha amabi, kuyacetyiswa ukuba uthathe ixesha uthandaze Umthandazo kwiNkosi yeNceba, Kungenxa yoko le nto ngezantsi kweli nqaku uzakufumana emibini yemithandazo ephambili yokucela ubabalo okanye imimangaliso ngamaxesha amabi.
1 Umthandazo oya kwiNkosi yeNceba
2 Imbali yoMthandazo kwiNkosi yeNceba
3 Eminye imithandazo
3.1 # 1 3:XNUMX PM Umthandazo
3.2 # 2 Umthandazo kwiNkosi yeNceba ukucela ubabalo
Umthandazo oya kwiNkosi yeNceba
La Umthandazo kwiNkosi yeNceba Nguwo umthandazo onamandla osetyenzisiweyo kwaye wenziwa ngamakholwa onke amaKatolika athabatha ixesha lokuwenzela imbeko kaKristu ukuze abonelele ngoncedo nakwesiphi na isidingo esinokufunyanwa likholwa.
Kungenxa yoko le nto kweli nqaku uza kufumana zonke iinkcukacha ezihambelana ne- Umthandazo kwiNkosi yeNceba Ukongeza kwisivakalisi ngokwaso.
Imbali yoMthandazo kwiNkosi yeNceba
Luhlobo lokuzinikela kobuKristu okwaziyo ukukhuthazwa kubulelwa kwiCawa yamaKatolika, kuya kugxila kwinceba kaThixo namandla akhe. Inceba yokucela ubabalo inokwenza abantu baqonde, nangaliphi na ixesha, ukuba inceba kaThixo iba lixabiso elihlawulelwa izono zethu zonke kwaye, ukuba kukho ukuthembela okupheleleyo kuYesu, zonke izono ziya kuxolelwa.
Ukuze unikezele ukuzinikezela kulo mfanekiso, kufuneka kwenziwe izinto ezithile zethutyana ezinje ngemithandazo kunye nezinto zangaphandle ezinje ngokuhlonelwa komfanekiso weNceba kaThixo. Olu hlobo lokuzinikela lwabhengezwa kubulelwa unongendi wasePoland owaziwa njengoFaustina Kowalsja kwidayari yakhe apho abalisa khona incoko yakhe eyimfihlakalo.
Nje ukuba ulwazi olunikezwe ngentla luthathelwe ingqalelo, yayilixesha lokwazi emibini yemithandazo ephambili okanye Umthandazo kwiNkosi yeNceba ukwazi ukucela ubabalo okanye imimangaliso kwiimeko ezahlukeneyo. Njalo khumbula ukuthandaza ngalo lonke ukholo kunye nothando olunokwenzeka.
# 1 3:XNUMX PM Umthandazo
Oku kuqala Umthandazo kwiNkosi yeNceba nguwo onceda nangaluphi na uhlobo lwesicelo; Kuya kufuneka kuthandazelwe malunga neentsuku ezintathu emva kwemini zilandelelana (ngentsimbi yesithathu emva kwemini). Ekupheleni komthandazo, ezintathu zikaBawo Wethu kunye noZuko ezintathu kufuneka zithandazwe.
«O Igazi kunye namanzi, aphuma entliziyweni kaYesu njengohlobo loMthombo weNceba kuthi, ndiyathemba kuwe!
Wena uphelelwe lixesha, Yesu, nangona kunjalo, umthombo wobomi weza ngamandla kwimiphefumlo, nakulwandle lweNceba olwavulwa yiyo yonke into el mundo iphelele. O mthombo woBomi, O inceba enkulu engenasiphelo, nceda sicela ukuba ugubungele umhlaba wonke kwaye usikhathalele.
OweGazi naManzi eza kuphuma kweyona Ntliziyo ingcwele kaYesu njengomthombo wenceba kuthi sonke, ndiyakuthemba. Owu Yesu, uzibeke elowo nalowo kuthi kuluthando olungummangaliso kuphela lothando olukhulu.
Ubulungisa kuYihlo ngekhe ucinywe ngesingqala esinye kuwe kwaye kuko konke ukutshabalalisa kwakho ziintlobo zezenzo zenceba yakho nothando lwakho olungenakuthelekiswa nanto eluntwini.
Xa wawufa emnqamlezweni, ngawo lo mzuzu weza ukunikela ngobomi bakho banaphakade kuthi ngokusivumela ukuba sivule elona cala lakho lingcwele, wavula umthombo ongapheliyo wenceba yakho; oza kusizisela eyona nto ixabisekileyo ubunayo, Oko kukuthi, igazi kunye namanzi entliziyo yakho. Nanku usomandla wenceba yakho, iphuma kuyo yonke inceba.
Owu Nkosi uYesu othandekayo, iNyaniso engunaphakade, uBomi bethu, ngale mini ndiyacela kwaye ndicenga inceba yakho kubo bonke aboni abahluphekayo. Intliziyo emnandi yeNkosi yam, egcwele inceba enkulu kunye nenceba engapheliyo engenakuphikiswa, nceda ubuzwe kuboni abahluphekayo. Eyona Ntliziyo ingcwele, umthombo wenceba apho imitha yolwazelelelo olungenakufikelelwa iza kuhamba phezu koluntu lonke.
Ndiyakucela oh ukukhanya kubo bonke aboni abahluphekayo. "
# 2 Umthandazo kwiNkosi yeNceba ukucela ubabalo
Kwimeko apho ufuna ukucela uncedo kwiNkosi yeMfesane xa uhamba ngamaxesha anzima, ungathandaza lo mthandazo malunga nobusuku obuthathu.
“Owu Thixo wenceba enkulu!, Ukulunga okungapheliyo, ukusuka enzonzobileni yokuphelelwa lithemba, lonke uluntu lubongoza namhlanje inceba yakho, imfesane yakho, Owu Thixo! kwaye ukhwaza ngelizwi elinamandla losizi.
Thixo wobubele obukhulu, sukuwutyeshela umthandazo weli lizwe lokuthinjwa! Owu Nkosi! Ukulunga okusinda kuzo zonke iintlobo zokuqonda komntu, ukuba uyabazi ububi obunzulu kwaye uyazi ukuba ngamandla abo abanakufikelela kuwe, siyakubongoza:
Phambili ngobabalo lwakho kunye nokwanda okuqhubekayo kwenceba yakho kuye ngamnye wethu, ukuze kuthi, ngendlela ethembekileyo, size ukuzalisekisa ukuthanda kwakho okungcwele, kubo bonke ubomi babo nangexesha lokumka kwabo kulo mhlaba.
Kwangathi ubungangamsha benceba yakho bangabakhusela kwiintolo eziphoswa ziintshaba zosindiso lwabo, ukuze ngokuzithemba, njengabantwana baKho, silindele ukuza kokugqibela (lusuku olwaziwa nguwe wedwa). Kwaye sinethemba lokufumana oko uYesu wasithembisa kona nangona sincinci.
Kuba uYesu ulithemba lethu: Ngentliziyo yakhe enenceba, njengasebukumkanini bamazulu. "
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Umthandazo waseKhatholika wasekuseni.